Somalia: Madaxweynaha Cusub Ee Galmudug Oo Loo Doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf - Wargane News
Home Somali News Somalia: Madaxweynaha Cusub Ee Galmudug Oo Loo Doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf
Doorashada madaxweynaha dowlad-gobolleedka Galmudug ayaa goor dhow la soo gabagabeeyay, waxaana ku guuleystay Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo helay codad gaaraya 54 cod.
Musharraxa kale ee la tartamayay wuxuu helay,34 cod wuxuuna ahaa Axmed Shariif Cali Hilowle ,sida waxaa ku dhawaaqay guddiga doorashada Galmudug.
89 xildhibaan ayaa ka qaybgaley codeynta doorashada madaxweynaha Galmudug,waxaana halaabay kaliya hal cod.
Guddiga doorashada markii uu ku dhawaaqay natiijada waxaa goobta ay doorashada ka socotay ka bilowday , dabaaldegyo iyo sacab lugu taageerrayo madaxweynaha guuleystay ee Galmudug.
Musharraxa doorashada looga guuleystay ee ,Axmed Shariif Cali Hilowle ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub.wuxuu caddeeyay doorashada si xaq ah oo cad inay u dhacday, Wuxuu u mahadceliyay xildhibaannada codka siiyay iyo kuwa ka codeeyay,wuxuu dalbaday in lala shaqeeyo madaxweynaha cusub,isagoo dhankiisa sheegay inuu la shaqeyn doono madaxweynaha cusub.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa inta kaddib dhaariyay madaxweynaha cusub ee Galmudug.
Axmed Ducaale Geelle Xaaf ,madaxweynaha cusub ee Galmudug oo hadal kooban jeediyay ayaa u mahadceliyay dhamman xildhibaannada Galmudug ee xilkan u doortay,wuxuu kalo uu ammaanay cid walba oo ka shaqeysay doorashada la soo gabagabeeyay ee Galmudug.
Wuxuu sheegay inuu ka shaqeyn doono inuu Galmudug horey u wadi doono,waxaa kalo uu ballan-qaaday inaysan xabad dambe iyo colaad ka dhici doonin Galmudug oo u ka shaqeyn doono nabadda.
Dowladda faderaalka iyo beesha caalamka ayuu ka dalbaday wada-shaqeyn madaxweynaha cusub,isagoo marka sheegay inaysan gacmaha ka laaban sida u yiri oo horey u dhacday.
Madaxweynaha cusub ayaa baaq u diray Ahlusunna,wuxuuna sheegay inay ku soo dhawaadan maamulka cusub ee u soo dhisayo,isagoo marka ka dalbaday inay ka qaybqaatan maamulka si wada-jir loogu dhiso hay’adaha dhiman.